Burma-keyboard-Tk v0.1.0 – box02's little blog
March 7, 2010 by box02
ကျနော် ခုလေးပဲ Burma-Keyboard-Tk package version 0.1.0 initial release ကို github repo ပော်တင်လိုက်ပါပြီး၊ zawgyi-keybaord project မှာလဲ ဒီ post ရေးပြီးရင်တင်လိုက်ပါမယ်။
ဒီ GUI program ကို Tkinter library ပော်မှာအခြေခံပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Tkinter က Python ရဲ့ Standard GUI Library ဖြစ်တာမို့ Python နဲ့အတူပါလာတက်ပါတယ်။ တချို့ Linux Distro တွေမှာပါချင်မှ ပါတက်ပါတယ်။ Ubuntu မှာတော့ Tkinter ပါလာပြီးသားပါ။
သို့သော်လည့်ပဲ Tkinter က Tcl/Tk နဲ့လဲပတ်သက်နေတော့ Tcl/Tk လိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Ubuntu နဲ့ Debian မှာဆိုရင် python-tk ကို install လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ Ubuntu အပြင်အခြား Distro သုံးသူများကတော့ ဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတာ သိနေပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ Tcl/Tk သွင်းရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် Python IDLE ကို package manager ကနေသွင်းပါ။ IDLE ကလဲ Tkinter နဲ့ရေးထားတဲ့ program မို့ သူလဲ Tcl/Tk ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ကိုသွင်းရင် အဆင်ပြေပါပြီ။
ဒါမှမဟုတ် idle ကိုသွင်းလဲရတယ်
ပြီးရင် burma-keyboard-tk ကို run လို့ရပါပြီ။ မ run ခင် အရင်ဆုံး package ကို extract လုပ်။ ပြီးရင် သူ့ရဲ့ source folder ထဲဝင်ပါ။
$ tar xzf burma-keyboard-tk-0.1.0.tar.gz
$ cd burma-keyboard-tk
ပြီးရင် burma-keyboard-tk.py ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို sudo python ခံပြီး run ပေးပါ။
$ sudo python burma-keyboard-tk.py
Extracting and Starting program
အဲဒါဆို program ကစတင် run ပြီး install စတာတွေလုပ်ဖို့ ready အနေအထားဖြစ်နေမှာပါ။
Main User Interfaces
ပြီးရင် font တစ်ကိုရွေးပြီး Confirm button ကိုနှိပ်ပေးပါ။ Confirm လုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ source status မှာ ကိုယ်သွင်းချင်တဲ့ font နဲ့ xkb file ကိုတွေ့မှာပါ။
Choosingafont and confirm
After confirming, font defined
Install လုပ်ဖို့အတွက် Command buttons တွေထဲက Install button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
Install from Command buttons
ဒါဆိုရင် installation ပြီးပါပြီ။ ကျန်တဲ့ logs, Vew log, Layout Help, About buttons တို့ကို နှိပ်ကြည့်ပြီး program ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ About button ကိုနှိပ်ရင် အောက်က About Dialog Window ငယ်လေးပော်မှာပါ။ အဲဒီထဲက ကြည့်ချင်တာတွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအဲဒီအထဲက Copyright button ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် copyright နဲ့ပတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတွေ့မှာပါ။
ဒီ program ငယ်ကို အသုံးဝင်မယ် အသုံးပြုရလွယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ အဆင်မပြေတာရှိရင်လဲပြောပါ။ ကျနော်က Tkinter နဲ့ရေးထားပေမယ့်လဲ တခြား GUI Toolkits ကို port လုပ်ချင်ရင်လဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ညီ Trh ကတော့ PyGTK ကို porting လုပ်ပေးဖို့ စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်ပါတယ်။ 🙂
ကျနော် github repo မှာတင်ထားပေးပါတယ်။ github အကောင့်ရှိသူများ fork လိုက fork နိုင်ပါတယ်။ Users မှအတွက် အဆင်ပြေအောင် အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ အမှားတွေပါနေရင်လဲ ပြောပါ။ ကျနော် ပြန် fix ပေးပါမယ်။
GitHub Repo: burma-keyboard-tk
This entry was posted in Howto | Tips, Linux/Unix, Open Source, Software and tagged Burma-Keyboard, font, FreeBSD, GUI, Installer, Linux, Myanmar, Package, Python, Tkinter, xkb. Bookmark the permalink.
← future gui of install scripter for mm3 and zawgyi keyboard [draft2]
Testing Burma-keyboard-Tk on FreeBSD →
3 thoughts on “Burma-keyboard-Tk v0.1.0”
kingsmith | April 23, 2010 at 9:04 am
Please can you give burma font in email.
kingsmith | April 23, 2010 at 9:11 am
I want to use burma font in email
box02 | April 26, 2010 at 8:33 am
You can download burma fonts and xkb files at zawgyi-keyboard.googlecode.com. You are able to write after installing them.